ယေရှုသေရခြင်းအကြောင်းက ဘာလဲ? ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အတွက် ယေရှုအသေခံဖို့လိုတာလဲ?
ဘာသာရေးခေါင်ဆောင်များက သခင်ယေရှုကို ဘုရားကိုပြစ်မှားပြောဆိုတဲ့အတွက် ကားစင်တင်ကွပ်မျက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုရားလို့ ဝန်ခံတဲ့အတွက်ပေါ့။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် သူ့ကိုအသေသတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေဟာ သူ့အပေါ် အမှန်ပဲသြဇာရှိကြသလား?
သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အစောမှာ ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေလာဇရုဟာ လေးရက်ခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယေရှုကသူ့ကို လူတွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပဲ အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဘယ်လိုရောဂါမဆို၊ ဘယ်လိုအနာဘယမဆို ပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်။ မွေးရာပါမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေ သို့မဟုတ် မွေးရာပါလမ်းမလျှောက်နိုင်သူတွေကိုပင် အကောင်းပကတိဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ယေရှုဟာ အံ့သြဖွယ်လက္ခဏာ တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကားတိုင်ပေါ်အသေသတ်ခြင်းမတိုင်ခင်လေးမှာပဲ သူ့ရဲ့ အံ့သြဖွယ်အမှုအရာတွေကြောင့် “ဤလောကသည် ထိုသူနောက်သို့လိုက်သွားပါပြီတကား”၁ လို့ သူတို့ တအံ့တသြ ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ သူတို့တွေကပဲ သူ မကြာခဏဖော်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ ခမည်းတော်နဲ့တန်းတူရည်တူရှိခြင်းကို [မရည်ရွယ်ဘဲ] သက်သေပြသခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အကြွင်းမဲ့တန်ခိုးရှင် ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအချက်အရ ကြာပွတ်ရိုက်ချက်၊ ခေါင်းထက်ကဆူးခက်သရဖူ၊ လက်ကောက်ဝတ်နဲ့ခြေထောက်တွေမှာ ရိုက်သွင်းတဲ့သံချောင်း စတာတွေက သူ့ကိုအသေမသတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာခံစားတဲ့ အသက်ရှူခက်ခဲကျပ်တည်းမှုဝေဒနာကလည်း အသေသတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ယေရှုဟာ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်ကနေ ဘယ်အချိန်မဆို ဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။
အဲဒါဟာ တစ်ဦးတစ််ယောက် ခန္ဓာကိုယ်ပက်လက်လှန်၊ ဦးခေါင်းကိုရေအောက်မှာနစ်၊ ပြီးတော့ မိမိသဘောဆန္ဒအတိုင်းရေနှစ်ခြင်း*ခံယူတာနဲ့ တူညီ်ပါတယ်။ နှစ်ခြင်းခံယူတဲ့သူက ဘယ်အချိန်မဆို [မကြိုက်ရင်]ကိုယ့်ခေါင်းကိုကိုယ်ပြန်ဖော်ခွင့် အပြည့်အဝရှိတယ်လေ။ ယေရှုဟာလည်း အသေခံဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး လုံးဝရှင်းပါတယ် သူဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် သူ့အသက်ကိုစတေးခံဖို့ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ယေရှုက “ကိုယ်အဆွေတို့အဘို့အလိုငှာ ကိုယ့်အသက်ကိုစွန့်ခြင်းမေတ္တာထက်သာ၍ မြတ်သောမေတ္တာသည် အဘယ်သူ၌မျှမရှိ။”၂ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်လဲ?
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက ကျနော်တို့နှလုံးသားနဲ့အပြုအမူတွေကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဟာ ဖျားနာနေတယ်၊ လိုအပ်နေတယ်၊ အားနည်းတယ်၊ အပြစ်ရှိတယ်၊ မျက်ကန်းပြီးလမ်းပျောက်နေကြတယ်ဆိုတာ တွေ့မြင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့အပေါ် သူ့ဘုရားအမြင်ဖြစ်ပြီး လူတွေကတော့ မကြိုက်ကြဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအတွက် သူလုပ်ပေးခဲ့တာတွေကို သင်တွေ့မြင်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒါဟာ အဝေးကနေလှမ်းပြီး ဝေဖန်ရှုတ်ချတာ (သို့) ပြစ်တင်စီရင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိတာ (သို့) သနားညှာတာမှု မရှိတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ သူနဲ့သဘောတူတာ/မတူတာအပထား၊ သူကတော့ ကျနော်တို့ဟာ အကူအညီ အသည်းအသန်လိုအပ်နေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ စခန်းသွားမနေဘူးဆိုတာ မြင်ပါတယ်။ ပြည့်စုံကြွယ်ဝခြင်း၌ အသက်မရှင်ဘူး သို့မဟုတ် ကျွန်တော်တို့ဆီက သူမျှော်မှန်းတဲ့ကောင်းခြင်းအသရေအတိုင်း အသက်မရှင်ဘူးဆိုတာ မြင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ သူ့ထံကနေထာဝရကင်းကွာပြီး သေဆုံးသွားမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန္တရာယ်ဆိုးကို မြင်ပါတယ်။ အပြစ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သူ့ထံကနေ ဖြတ်တောက်ခံရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ သူရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကျေးဇူးသိတတ်/မသိတတ်။ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တယ်မြင်/မမြင်။ ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တယ်လို့ သူထင်တဲ့ အပြစ်ဒဏ်အတွက်သေခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စား ခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ဂရုမစိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ အကယ်ဆယ်ခံရဖို့၊ အခွင့်လွှတ်ခံရဖို့လိုတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အတွက် မယုံကြည်နိုင်ဖွယ် ဒုက္ခခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုက ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ပြယုဂ်အနေနဲ့ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ ခံစားပြီး သေရုံသေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာ သိလို့ပါ။ အပြစ်ကြောင့် သူ့ထံကနေ ထာဝရကင်းကွာပြီး ကျနော်တို့သေရင်သေမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကျွန်တော်တို့မသေရဘဲ သူအသေခံမယ်။ ဒါမှ ကျွန်တော်တို့ အပြစ်အတွက်ကျေအေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သူ့ကို ထာဝရမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကိုဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့ သမ္မာကျမ်းစာက “သူတော်ကောင်းအတွက်ကြောင့် အသေခံဝ့ံသူသောသူ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်မှန်စေတော့။ ငါတို့သည် အပြစ်ရှိစဉ်ပင်၊ ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို အဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကို ငါတို့အား ထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏။”၃ လို့ ပြောပါတယ်။
မကြာခင်ကျရောက်လာမယ့် အသေသတ်ခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ကောင်းစွာကြိုတင်သိမြင်တဲ့အတွက် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်အသေသတ်ခြင်းမခံရခင် နာရီတွေအလိုမှာ “ကိုယ်တော်သည် အကျွနု်ပ်ကို စေလွှတ်တော်မူကြောင်းနှင့် အကျွနု်ပ်ကို ချစ်တော်မူသကဲ့သို့ သူတို့ကိုလည်း ချစ်တော်မူကြောင်းကို လောကီသားတို့သည် သိစေခြင်းငှာ ...”၄ ဆိုပြီး ခမည်းတော်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီဟာက ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း မေးခွန်းတွေကို မေးပါတယ် - ကျွန်တော်တို့ ကယ်တင်ခံရဖို့ လိုအပ်သလား? ကျွန်တော်တို့မတွေ့မြင်တဲ့ ဘယ်အရာကို ယေရှုက ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ မြင်ခဲ့တာလဲ? သူက ကျွန်တော်တို့အတွက် လက်ဝါးကားတိုင်မှာ အတင်ခံဖို့၊ အညှင်းဆဲခံဖို့နဲ့ အသေခံဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ?
ကျွန်တော်တို့အားနည်းကျရှုံးတဲ့အချက်ကိုမြင်လို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒေါသတွေ အမုန်းတွေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးမခံမှုတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နာကျင်စေတဲ့ဝေဖန်စကားတွေနဲ့အပြုအမူတွေ။ ကျွန်တော်တို့က အခြားသူတွေအပေါ် အပြစ်ကျူးလွန်တယ်။ တခါတခါ အခြားသူများကလည်း ကျွန်တော်တို့အပေါ် အပြစ်ကျူးလွန်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် ရည်ရွယ်စံထားတဲ့ကောင်းခြင်းအသရေအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ ထိုက်တန်အောင် မနေနိုင်ကြဘူး။ ဘုရားရဲ့စံနှုန်းမဆိုထားဘိ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံနှုန်းအတိုင်းတောင် ကျွန်တော်တို့ မပြုမူမနေထိုင်နိုင်ကြပါဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် တခါတလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် စက်ဆုပ်ရွံရှာကြပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ ပြည့်စုံမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားက ဘာမြင်တွေ့တော့မလဲ?
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ သူ့ကိုမလိုချင်လို့၊ ကျွန်တော်တို့ဘဝထဲကို ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်စေချင်လို့ အတင်းအကျပ် မောင်းထုတ်နေကြတာတွေကော?
သူ ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဆီကနေ ထွက်မသွားခဲ့တာလဲ? ဘာကြောင့် လှည့်ထွက်မသွားခဲ့တာလဲ?
အပြစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ကို ဒီအတိုင်းချန်ရစ်ထားမယ့်အစား သူ ကျွန်တော်တို့ဆီလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာထဲကို ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေရဲ့ဒဏ်ကြွေးကို ယူတင်ပြီးသကာလ သူကိုယ်တိုင်ပဲ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စား သေပြစ်ကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“သို့သော်လည်း ကရုဏာတော်နှင့်ကြွယ်ဝတော်မူသော ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသော မဟာမေတ္တာတော်အားဖြင့်၊ ဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်ရှိသောငါတို့ကို ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသက်ရှင်စေတော်မူပြီ။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။”၅
သူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုဗွေမယူဘဲ စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ခွင့်လွှတ်လို့ကောမရဘူးလား? ကျွန်တော်တို့အတွက် ဟုတ်မယောင်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေဟာ အလွယ်တကူချေဖျက်ပစ်လို့မရအောင်ကို ဆိုးရွားလွန်းတယ်လို့ သူပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေရဲ့ပြင်းထန်မှုနဲ့ ကျွန်တော်တို့အပေါ်ထားတဲ့ သူ့မေတ္တာက သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်ကိုခွင့်လွှတ်ပြီဆိုရင် အဲဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့အတူတူ တွဲပါလာတဲ့ နာကျင်မှုကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး သိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ပိုကြီးမားရင် သူ့ကိုခွင်လွှတ်ဖို့က ပိုလို့ပင်နာကျင်တတ်ပါတယ်။ ယေရှုက ကျွန်တော်တို့ကို ထာဝရနက်ရှိုင်းစွာ ခွင့်လွှတ်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို လုံးလုံးလျားလျား အပြည့်အဝကို ခွင့်လွှတ်ခံရစေချင်တယ်။ သူ ကျွန်တော်တို့ကို အပြည့်အဝလက်ခံမယ်၊ အဲဒါဆို သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ အပြစ်နံရံကြီးမခံတော့ဘူးဆိုတာကို သိစေချင်ပါတယ်။ “အပြစ်တရား၏အခကား သေခြင်းပေတည်း။ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုလာဒ်မူကား၊ ငါတို့သခင်ယေရှုအားဖြင့် အသက်ပေတည်း။”၆်
ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့် သူ ဝေဒနာခံစားပြီးသေဆုံးရတာဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ဒါတွေအားလုံးကို အောင်နိုင်ပြီး သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာ သေခြင်းမှပြန်လည်ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို အပြစ်တရားနဲ့ သေခြင်းတရားက မထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါဘူး။ သူ့အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း သူ့လိုပဲအောင်နိုင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ထံချဉ်းကပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့၊ ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲဝင်ရောက်ဖို့ တောင်းပန်ခြင်းအားဖြင့် သူကမ်းလှမ်းတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို လက်ခံတာ/မခံတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။
ရှင်ယောဟန်က ကျမ်းစာထဲမှာ ဒါကို “ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုချစ်တော်မူခြင်းမေတ္တာတော်ကို ငါတို့သည် သိ၍ယုံကြည်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်သောသူသည် ဘုရားသခင်၌တည်၏။ ဘုရားသခင်သည်လည်း ထိုသူ၌တည်တော်မူ၏။ ထိုသို့ ငါတို့သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပြည့်စုံသောအားဖြင့်၊ တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောနေ့၌ ရဲရင့်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်။”၇ ဆိုပြီး ကောင်းကောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
အသက်မချုပ်မှီအချိန်လေးမှာ သခင်ယေရှုက- “တရားတော်မူသောအဖ၊ လောကီသားတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုမသိသော်လည်း အကျွနု်ပ်သိပါ၏။ ကိုယ်တော်သည် အကျွနု်ပ်ကို စေလွှတ်တော်မူကြောင်းကို ထိုသူတို့ [ယေရှုနောက်လိုက်တော်များ] သည် သိကြပါ၏။ ကိုယ်တော်သည် အကျွနု်ပ်ကို ချစ်တော်မူသောမေတ္တာသည် သူတို့၌ရှိစေခြင်းငှာ၎င်း၊ အကျွနု်ပ်သည် သူတို့၌ရှိစေခြင်းငှာ၎င်း၊ ကိုယ်တော်၏နာမကို အကျွနု်ပ်သည်သူတို့အား ပြညွှန်ပါပြီဖြစ်၍ အစဉ်ပြညွှန်ပါမည်” လို့ ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။
ယေရှုခရစ်တော်ကို သင့်အသက်တာထဲ အခုပဲ လက်ခံခေါ်ဖိတ်လိုပါသလား? ဒီလိုခေါ်ဖိတ်လို့ရပါတယ်။
“ယေရှု၊ ကျွန်တော်/ကျွန်မအသက်တာထဲကို ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော််/ကျွန်မရဲ့အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ။ ကျွန်တော်/ကျွန်မအတွက် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေခံခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ်တော် အလိုရှိတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်/ကျွန်မအသက်တာကို ဦးဆောင်လမ်းပြပါ။ ကျွန်တော်/ကျွန်မအသက်တာထဲကို ခုပဲဝင်လာပြီး ကိုယ်တော်နဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အာမင်။”
(၁) ရှင်ယောဟန်၁၂း၁၉ (၂) ရှင်ယောဟန် ၁၅း၁၃ (၃) ရောမ ၅းရခ-၈ (၄) ရှင်ယောဟန် ၁ရး၂၃ (၅) ဧဖက် ၂း၄-၅ (၆) ရောမ ၆း၂၃ (၇) ရှင်ယောဟန် ပ-စောင် ၄း၁၆-၁၇ (၈) ရှင်ယောဟန် ၁ရး၂၅-၂၆
* ဘာသာပြန်ဆိုသူ၏မှတ်ချက် - ရေနှစ်ခြင်း (Baptism) ခံယူခြင်းဟူသည်မှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်က သခင်ယေရှုကို မိမိ၏ ကယ်တင်ရှင်နှင့် သခင်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံသောအခါ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တို့၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်အညီ ယေရှု၏သေခြင်း၊ မြှုပ်နှံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ပုံဆောင်သောအားဖြင့် ရေတွင် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အမည်နာမ၌ ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှစ်ပြီးမှ ပြန်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤရေနှစ်ခြင်းအားဖြင့် အသင်းတော်၏သင်းပြည့်အသင်းသားလည်း ဖြစ်စေသည်။ ရေနှစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသင်းတော်များ၌ ကွဲလွဲသောအယူဝါဒများနှင့် မိမိတို့၏ ထူးခြားချက်များ ကိုယ်စီရှိကြလေသည်။